/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Synephrine HCL Powder - အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတို့ဖြစ်သည်
အပေါ် Posted 11 / 25 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
1. Synephrine HCL ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ယနေ့လူ ဦး ရေ၏မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းသည်ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေနေသည်။ ကောင်းပြီ, ထိုသူအပေါင်းတို့အကြား, ၏အသုံးပြုမှု Synephrine HCL အမှုန့် ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအဆီကိုသင်အလွတ်ထားနိုင်သည့်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Synephrine အမှုန့်သည်ရှားပါးသော Alkaloid ဓာတုဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားအပင်များမှလိမ္မော်ရောင်ကဲ့သို့သောအပင်များတွင်တွေ့ရသောသဘာဝပစ္စည်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် 1500 ကဲ့သို့အစောပိုင်းကာလများမှအသုံးပြုသောလိမ္မော်ရောင်ရှိအဓိက bioactive ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဒါဆိုဘာကိုအတိအကျသုံးတာလဲ။ အတိတ်ကာလ၌ဤမှော်ဖြည့်စွက်အူလမ်းကြောင်းအူလမ်းကြောင်းပြissuesနာများအတွက်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အစာကြေခြင်းနှင့်ပျို့ချင်ခြင်းတို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင်၎င်းသည်ထိရောက်သောဆေးတိုက်ခြင်းနှင့်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းအတွက်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြောင်းလည်းလူသိများသည်။
နည်းပညာပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှခါးသောလိမ္မော်ရောင်သည်ဖန်းဂတ်စ်နှင့်ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများ၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်အစာအိမ်ပြproblemsနာများမှသည်ခေတ်သစ်ပြtroublနာများကိုကုသရာတွင်ပိုမိုအသုံးဝင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ခါးသောလိမ္မော်ရောင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာ Synephrine HCL ဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ၎င်းတွင်အဘယ်ကြောင့်များစွာသောကုသမှုအရည်အသွေးများပါ ၀ င်သည်ကိုသင့်အားအကြောင်းပြချက်ပေးသည်။
Synephrine ၏အမှုန့်မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံသည် ephedrine ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Ephedrine စျေးကွက်ထဲတွင်အစားအစာဖြည့်စွက်စာအဖြစ်မရှိတော့ပါ။ ဤအရပ်မှ Synephrine ၎င်း၏အကောင်းဆုံးအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ Octamine သည် Synephrine ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုဖြစ်ပြီးအဆီများလောင်ကျွမ်းသောဂုဏ်သတ္တိကြောင့်ကျော်ကြားလာသည်။
2. Synephrine HCL- လှုပ်ရှားမှုယန္တရား
Synephrine အကျင့်ကိုကျင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏အပြောင်းအလဲမှတဆင့်။ ၎င်းသည်အသည်း၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုထိခိုက်ခြင်းဖြင့်အင်ဇိုင်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအစာခြေခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ Synephrine HCL (5985-28-4);
AMPK ကိုနှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့်ကြွက်သားများအတွင်းသို့ဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်ဆဲလ်အတွင်းရှိလောင်စာဆီပမာဏကိုသိရှိရန်နှင့်အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဆဲလ်များထဲသို့သကြားဓာတ်များကိုတိုးပွားစေသည်။
Synephrine သည် ATP ပမာဏတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်အသည်းမှဓာတုဓာတ်ပြုမှုများအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ပိုမိုပေးသည်။
Synephrine သည် alpha-1 နှင့် alpha-2 adrenoreceptors များအတွက်အားနည်းသော activator တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခုလုံးသည် adrenaline ကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအားဖြင့်လူ၏သွေးပေါင်ချိန်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ Synephrine 5985-28-4 သည်သင်၏နှလုံးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ephedrine သည် alpha-5985 နှင့် alpha-28 adrenoreceptors နှစ်ခုစလုံးကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်ဟုလူသိများသောကြောင့်၎င်းသည် ephedrine နှင့် Synephrine 4-1-2 တို့၏အဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
Synephrine HCL သည် neuromedin U2 receptors များကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဤရွေ့ကား hypothalamus တွင်တည်ရှိပြီးနိုးတိုးပွားစေသည့်မော်လီကျူးများဖြစ်ကြသည်။
Synephrine သည် eotaxin-1 ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်စေပြီးအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် eosinophils များကိုရောင်ရမ်းသောtoရိယာသို့ရွှေ့ရန်ညွှန်ပြသောမော်လီကျူးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် NADPH oxidase လုပ်ဆောင်မှုကိုပိတ်ဆို့ပြီး neutrophils မှထုတ်လုပ်ပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်အောက်စီဂျင်အမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
NF-kB ၏ activation ကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် Synephrine သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ အကြောင်းမှာ overactive NF-kB သည် psoriasis၊ ရောင်ရမ်းအူသိမ်ရောဂါနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းသောရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုလူသိများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Synephrine သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားလူနာများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော butyrylcholinesterase နှင့် acetylcholinesterase အင်ဇိုင်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
3 ။ Synephrine HCL အသုံးပြုမှု
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် (1) Synephrine HCL
Synephrine တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့် ကြောင်းနည်းလမ်းများစွာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။
တစ်ဦးအဖြစ် အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နင်း- သငျသညျအစဉ်အမြဲ snacking နေသောသူအမျိုးအစားလား ငါဆိုလိုတာကမိုးသည်းထန်စွာအစာစားပြီးနောက်တောင်မှသင်၏အစာအိမ်သည်ရုန်းရင်းခတ်ခြင်းနှင့်တစ်ခုခုတောင်းစားခြင်းမပြုမီကြာမြင့်စွာကြာသည်မဟုတ်ပါ။ သင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျချင်သော်လည်းဤသည်သည်သင်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီ ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုနှိမ်နင်းပြီးသရေစာစားရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့်သင့်အားပိုမိုမြန်ဆန်စွာခံစားရစေသည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းသင်၏ကျန်းမာသောအစားအစာကိုစွဲမြဲ။ အလေးချိန်ပိုစိုက်ရန်လိုသည်။ သင်သတိမပြုမိခင်မှာသင်အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့သောပါးလွှာသော bikini ကိုယ်ထည်ကိုအရောင်တောက်နေလိမ့်မည်။
(2) Synephrine HCL အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်
အဆီပိုလျှံခြင်းသည်ကျန်းမာရေးကိုသာမကကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းသည်သင့်အားအသက်ရှည်စေခြင်းအပါအဝင်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများရရှိစေသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Synephrine HCL အသုံးပြုမှုသည်ကိုယ်ခန္ဓာအဆီအရည်ပျော်စေရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်သက်သေပြနည်းဗျူဟာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင်ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်မည်သို့ကူညီသည်ကို၎င်း,
အလုပ်ထွက် session အတွင်းစွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်
သင်သည်အားကစားရုံသို့သွားပြီးအားလုံးပင်ပန်းပြီးအိပ်ချင်နေစရာမလိုပါ။ Synephrine သင်တယ်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုလူသတ်သမားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်အားလုံးကိုသင့်အားကျွေးမွေးခြင်းဖြင့်လောင်စာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ကြွက်များနှင့်အတူအုပ်ချုပ် Synephrine အမှုန့် သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်အဆင့်တိုးလာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း, ပိုမိုရေကူးနိုင်ခဲ့ကြကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
စွမ်းအင်အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် Synephrine သည်အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်လူသိများသည်။ အဆီနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုတိုးမြှင့်သောစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးအေရိုးဗစ်နှင့်အောက်ဆီဂျင်မဲ့ချေလေ့ကျင့်ခန်းနှစ်ခုလုံးမှရရှိသောထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုတိုးစေသည်။ ဒါကအလွန်ကြီးစွာသောကြိုတင်လေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး စေသည် အဆီ burner လွန်း။
အမျိုးသား ၁၂ ယောက်အားလေ့လာမှုတစ်ခုအရလေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီ ၄၅ မိနစ်ခန့်လေးသောကိုယ်အလေးချိန်ပေါင်ဒါကိုသောက်သုံးပြီးနောက်သူတို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးတိုးစေခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ Synephrine သည်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးဘာသာရပ်များကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခဲ့သည်။
၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအဆီများကိုဖြိုခွဲခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပိုကောင်းတဲ့ဇီဝြဖစ်အဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ Synephrine သည်လူ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Synephrine ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမြင့်မားလာသောအခါသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သိုလှောင်ထားသောအဆီပိုများရန်အတွက်အများဆုံးရောက်ရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသည်အဆီကိုပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
၎င်းလေ့လာမှုအရ 50mg ဆေးတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်အခြေခံဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းသည်လာမည့်ခုနစ်မိနစ် ၅၅ မိနစ်တွင် 65 ကယ်လိုရီများမြင့်တက်လာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အခြားမော်လီကျူးများဖြစ်သော hesperidin နှင့် naringin တို့နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါဇီဝဖြစ်စဉ်တိုးတက်မှုသည်ကယ်လိုရီတစ်ရာရှစ်ဆယ်ကျော်အထိမြင့်တက်လာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကယ်လိုရီပမာဏကိုနှစ်ဆယ်မိနစ်ပြေးထွက်ခြင်းနှင့်အတူမီးရှို့ကြ၏။
Synephrine သည်အရိုးကြွက်သားများကဂလူးကို့စ်ကိုစုပ်ယူခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်သွေးစနစ်မှဂလူးကို့စ်ပိုလျှံမှုကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းအားဖြင့်အဆီများကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားများကိုစွမ်းအင်အတွက်ထိရောက်စွာအသုံးပြုသောဂလူးကို့စ်အားထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ပိုမိုကြွက်သားဂလူးကို့စသည်ကြွက်သားသန်စွမ်းမှုနှင့်ပမာဏကိုဆိုလိုသည်။
4. Synephrine HCL သောက်သုံးသော
Synephrine HCL သောက်သုံးသောပမာဏသည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သျောလညျးအဖြစ်စံသောက်သုံးသော ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့် တစ်နေ့လျှင် 100mg ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သုသေသနပြုချက်များအရ 35mg ၏ Synephrine HCL ဆေးသောက်ခြင်းသည်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ The Synephrine HCL သောက်သုံးသော အဆိပ်ကိုရှောင်ရှားရန်တစ်နေ့လျှင် 200mg ထက်မပိုသင့်ပါ။
သင်၏ပထမဆုံးအကြိမ်သောက်ခြင်းဖြစ်လျှင်သင်၏သည်းခံစိတ်ကိုအကဲဖြတ်ရန် 10-20mg ခန့်ပမာဏနည်းသောဆေးဝါးဖြင့်စတင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှမခံစားပါကသင်သောက်သုံးသောပမာဏကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ၂ မိနစ်မှ ၄ နာရီအထိသောက်သုံးသောပမာဏကိုမတိုးပါနှင့်၊ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
Synephrine ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်သို့မဟုတ်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေသည့်အနေဖြင့်၊ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီမိနစ် ၁၅ မှ ၃၀ မိနစ်တွင် ဦး စွာပြုလုပ်သင့်သည်။ သူတို့ကိုရေနဲ့ယူဖို့အကြံပြုထားတယ်။
အချို့သောသူများသည် Synephrine ကိုသူ့အလိုလိုယူလိုကြသော်လည်းအခြားသူများကမူ၎င်းကို Stack လုပ်ရန်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ သငျသညျကိုအခြားကိုယ်အလေးချိန်မှုန်များနှင့်သင်၏စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်သောသူတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်သုံးနိုင်သည်။ Yohimbine ဟာ Synephrine နဲ့အတော်ကောင်းပါတယ်။
L-theanine သည်လှုံ့ဆော်သူတစ် ဦး နှင့်ကောင်းစွာပေါင်းစပ်။ ကောင်းသည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုချောမွေ့စေရန်နှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်မိုးမခအခေါက်ကိုလည်း၎င်း၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် stack တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်သည်မှာ၎င်းကိုသန့်ရှင်းသော anhydrous ပုံစံဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဂူရာနာထုတ်ကုန်ကဲ့သို့သောအခြားရင်းမြစ်များမှဖြစ်စေပါ ၀ င်သည်။
5. Synephrine HCL အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ
Synephrine HCL သည်ကိုယ်အလေးချိန်ပေါများသောသန့်ရှင်းသော grail ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အစာစားခြင်း (သို့) ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းသောအစာစားခြင်းကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်သင်၏အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေသည်။ သင်သည်သင်၏အစာစားချင်စိတ်ကိုလျှော့ချရန်ပင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည် Synephrine ဖြည့်စွက် သငျသညျအစာရှောင်ခြင်းပုံသဏ္getာန်ရချင်လျှင်နှစ်ဆယ်လေးနာရီအဘို့။
ဆောင်းပါးမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း၊ သင့်ကိုအားရှိစေတယ်၊ ​​အထူးသဖြင့်သင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်၊ အစာမစားချင်ဘူးဆိုရင်၊ ကန်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်အချိန်အနေဖြင့်၊ မိနစ် ၃၀ အတွင်းသင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရလိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်မည်မဟုတ်။ Synephrine ဝက်သက်တမ်းသည်နှစ်နာရီရှိသောကြောင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်သင့်အားနှစ်နာရီခန့်ကြာရှည်နိုင်သည်။
သင့်တော်သောအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါက Synephrine ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနှစ်ပတ်အတွင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အစားအစာကိုစားခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာမှအဆီအချို့ဖယ်ရှားပစ်လိုသည်ဟုခံစားရသူတစ် ဦး အတွက်ဤသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
အဆီလောင်ကျွမ်းသူအများစုသည်သင့်အားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားစေသည်ဟုလူသိများသော်လည်း၊ Synephrine ကသင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအန္တရာယ်မပေးဘဲဤအရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်ဟုသင်ယုံကြည်မည်လော။ Synephrine ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအများစုသည်အနည်းဆုံးနှင့်သုညဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြပြီးလူကြိုက်များမှုမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ယခုသင်သည်သင်၏ကိုယ်အလေးချိန်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရန်အလွန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီအဘယ်မှာရှိ, ဒီအဆီ burner ဘယ်မှာရသနည်း ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကသင့်ကိုအကောင်းဆုံး Synephrine ကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးထားသလောက်၊ တချို့ကသင့်ကိုထုတ်ကုန်အတုတွေရောင်းမှာဖြစ်လို့သင်အရမ်းဂရုစိုက်ရမယ်။ သင့်အားလုံခြုံပြီးထိရောက်သော Synephrine ဖြည့်စွက်မှုများဖြင့်သင့်ငွေကိုတန်ဖိုးထားပါသည်။ သင်ပြီးတာနဲ့ Synephrine ကိုဝယ်ကြလော့ ငါတို့ဆီမှ, သင်သည်အဆီကိုမီးရှို့နှင့်အဆီလျင်မြန်စွာနှင့်အစဉ်အမြဲဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟုစိတ်ချပါ
100% သဘာဝဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်လျှို့ဝှက်ထပ်ဆောင်းမှုများမရှိပါ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ 'အံ့ဖွယ်အမှု' ကိုယ်အလေးချိန်အမှုန့်ကိုမှာထားပါ။ မလိုချင်သောပေါင်များများဆုံးရှုံးပြီး Synephrine ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားပါ။
Shawn M. Talbott၊ Kerry Hughes မှကျန်းမာရေးပညာရှင်၏အစားအသောက်ဖြည့်စွက်မှုလမ်းညွှန်၊ စာမျက်နှာ 13
အဝလွန်ခြင်း - ကူးစက်ရောဂါဗေဒ၊ ရောဂါဗေဒနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမှု၊ Debasis Bagchi၊ Harry G. Preuss, စာမျက်နှာ 538 မှတည်းဖြတ်သည်။
အားကစားနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများတွင်အာဟာရဖြည့်စွက်မှုများ၊ Mike Greenwood၊ ဒေါက်ဂလပ်ကလာမန်၊ ဟိုဆေးအန်တိုနီယို၊ စာမျက်နှာ 231 မှရေးသားသော
143 Views စာ